योगदानले नपाएको अवसर, अर्थात मणी थापा ! - Jhilko
झिल्को टिप्पणी । उबेलाका प्यूठानका चल्तापूर्ता हेडसरका चतुर पुत्र थिए उनी । पढाईमा अव्वल, अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै तेज । आफ्नो थातथलोमा सम्पन्न र वैभवशाली जीवनयापन गरिरहेका पिताको विणो थाम्न अघि बढेका भए उनको वर्तमान पहिचान अर्कै हुन सक्थ्यो । तर कवि रोवर्ट फ्रस्टका कविताँस द रोड नट ट्राभल्ड भने झैं त्यो उनको वाल्यकालिन परिवेशका आधारमा अब उनको परिचय बन्दैन, बनाएनन् पनि । किन की, उनी पिताको पद्चाप पछ्याउनतिर लागेनन् । बरु, आफैले रोजे, खने र अघि बढे जीवनको गोरेटो । अनि अहिले उनी आफ्नै बलबुतामा आर्जेको जीवनपथको प्राप्तीका माझबाट लम्किदै समकालिन राजनीतिको एउटा स्थापित पात्रका रुपमा क्रियाशिल छन ।
उनी अर्थात मणी थापा, नेपालको वाम राजनीति र खासगरी जनयुद्धकालिन तत्कालिन माओवादी तप्काका एक समानान्तर नाम वा व्राण्ड नै हुन् । वाल्यकालदेखि नै गीत संगितमा रुचि राख्ने उनी २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनकालदेखि बढी नै साँस्कृतिक फाँटमा बढी रम्न र जम्न थाले । फलतः उनी जब वैचारिक रुपमा वाम रुझानतिर ढल्किए, तबदेखि नै माओवादीतिर आकर्षित भए । २०५२ मा माओवादीले दीर्घकालिन जनयुद्धको बाटो पक्रदा, त्यसको साँस्कृतिक फाँटको जग र आधार निर्माण गर्ने एक कुशल अगुवाका रुपमा उनै मणी थापा अग्रसर भए, अन्य कैयन सहायात्री, सहयोद्धाहरुका साथ । बस, जनयुद्ध प्रारम्भको यही विन्दूबाट सुरु भयो, मणी थापाको संगठित रक्तिम क्रान्तिकारी संघर्ष असली कर्म र धर्म । अनि समयक्रमका योगदानहरुका आलोकमा स्थापित भयो उनको नेतृत्वदायी पहिचान, वास्तविक कमरेड मणी थापाका हैसियतमा ।
यी पक्तिहरु मणी थापाका पक्षमा अन्धभक्ति दर्शाउन उतार गरिएका आरती होईनन्, जनयुद्धको त्यो कठोर संघर्षकालिन कालखण्डको यथार्थ स्मरण र समीक्षाका दौरान स्वतः प्रस्फुटित हुने र उनी जोडिने प्रतिनिधि गौरवान्वित प्रसंगहरु मात्र हुन । रचनात्मक सोच शैली र कर्ममा बढी रमाउने थापाले जनयुद्धको प्रारम्भदेखि नै साँसकृतिक मोर्चा सम्हाले । धेरै रचना, गाना बजाना र प्रदर्शन गरे । र त, उनी जनयुद्धकालिन माओवादी संर्घष र बलिदानको साँस्कृतिक मोर्चाको अविछन्न सदस्य, नेतृत्व र एकहदसम्म कतै छुटाउने नमिल्ने पर्याय पात्र बने ।
फाँटेको जालोले छेकेको
छेके पनि छर्लंग देखेको
हेर गाउँले हो,
देशमा के के भो....
तत्कालिन जनयुद्धलाई आम जनमानसमा छिटो र घनीभूत रुपमा बिस्तार र स्थापित गर्न यस्तै क्रान्तिकारी गीति भाकाहरुमा मणी थापा नाचे, नचाए । धेरैलाई नचाए, हसाँए, गाउन लगाए । र, समग्रमा उनले जनतालाई माओवदाी जनयुद्धमा समाहित गराए, जनतालाई युद्धमा गोलवन्ध गराए । भनिन्छ नी संसारलाई छिटो तरंगित र आकर्षित गर्ने विधा गीत संगित हो । त्यही माद्यमका सेतु बनेर उनले उनले जनयुद्धको राप, ताप र प्रभाव र उभारलाई देशभर आम जनमानसमा छिटो स्थापित गराए ।
अहिलेका नव अनुहारधारी स्वघोषित माओवादीहरुका हकमा त भन्न सकिन्न तर २०४६ को जनआन्दोलनको ताका त क्रान्तिकारी कित्ताका साँस्कृतिक फाँटका अग्रमोर्चाका चर्चित नेता उनै थापा थिए । त्यो बेला उनी गाउने बजाउने, नाच्ने नचाउने मात्रै गर्दैन्थे । जनयुद्धको सुरुवातदेखि नै उनी साँस्कृतिक, फौजी र राजनीतिक मोर्चामा पनि अग्रभागमा, नेतृत्वदायी भूमिकामा समान थिए । तत्कालिन शाही नेपाली सेनासंग पार्टीको आमने सामने युद्ध चर्केका बेला उनको सृजनाः
लेखिरहेछु चिठ्ठी तिमीलाई
ले तत्कालिन सेना र सुरक्षाकर्मीलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा माओवादी छापामारसंग भिडनबाट पछि हट्न वा पार्न निकै ठूलो योगदान गरेको थियो ।
वीरताको गाथा बोकर.........
जस्ता उनका मान्छेका शशीरमा काँडा उमार्ने र रगत उमाल्ने कैयन गीतहरुले जनयुद्धको उभारलाई उचोँ बनाउन असीमित योगदान गरे । त्यो युद्धकालका सर्वाधिक चर्चित गी संगित मध्ये धेरै उनकै रहे । खासमा उनी प्यूठानका थिए, तर छाए, पूर्वमा बढी अनि मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै उनको त्रिकोणी कार्यक्षमता, नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण, युद्धको मैदानमा फौजी दस्ताका रुपमा, साँस्कृतिक फाँटमा कलाकारका रुपमा र नेताका रुपमा राजनीतिक मोर्चामा । उनका यी केही प्रतिनिधि सृजना मात्र हुन् , कैयन रक्तिम रचनाहरुमा उनी अग्रभागमा सामेल र सफल भए ।
यसरी रक्तरंजित जनयुद्धकालिन संर्घषका मोर्चा र बलिदानका बाछिटाबाट उनी कहिल्यै अलग र फरक भएनन् । समयक्रममा राजनीतिक चेत र विश्लेष्णका आधारमा उनका केही फरक मतहरु जरुर रहे, पार्टीभित्रै । तर क्रान्तिकारी आन्दोलन र संघर्षबाटै चाँहि उनी कहिल्यै अलगथलग रहेनन् । जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म अनि गणतन्त्रदेखि नयाँ संविधानसम्मको दौरान युद्धकालिन माओवादीले जति घुम्ती, उकाली ओराली र प्राप्ती वा क्षती व्यहोर्नु परयो, त्यसका कतै सहयात्री, कतै किनाराको रमिते त कतै तटस्थ दर्शक भएर उनले राजनीतिक पाटो र बाटो पक्रिरहे, आफै अग्रभागका यात्री बनेर ।
यस्तै यस्तै संघर्षपूर्ण विरासतबाट उदाएका उनै मणी थापा अहिले एकीकृत नेकपाका स्थायी समिति सदस्य छन् । नेकपाभित्रको राजकीय सत्तामा उनको वर्तमान हैसियत धिक्कार नै पर्ने स्तरको त होईन । तर, ५ नम्वर प्रदेशको भूगोलका उनै मणी थापा राज्यको राजकीय पद वा जिम्मेवारी प्राप्तीका मार्गमा भने एक पछि पारिएका पात्र हुन भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।
धेरैको अपेक्षा थियो, यस पट्कको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थापाले ५ नम्वर प्रदेशबाट उम्मेद्धवार हुने मौका पाउने छन । किन की उनी युद्धकालमा पूर्वमा नै बढी खटेका थिए । वर्तमानमा पनि उनको भूगोल ५ नम्वर प्रदेश नै थियो । अपाँग कोटाबाट जगप्रसाद शर्मा अपारले यसपट्क राष्ट्रिय सभाको साँसदको प्रतयाशी बन्ने मौका पाए । त्यो अपारका हकमा एउटा सम्मान नै हो, उनको अतुलनीय योगदानको आधारमा ।
तर राजनीतिक नेतृत्वका हिसावले माथिल्लो सदनमा प्रवेश गर्ने, गराउने मामिलामा भने उनै मणी थापा यसपट्क स्वतः हकदार हुदाहुदै किनाराकृत गरिए । नेकपा नेतृत्वले कहिल्यै राजकीय सत्ताको अवसर नलिएका मणी थापाहरुलाई ओझेलमा पारेर गोरखामा अस्ती भर्खर प्रत्यक्ष तर्फको चुनाव हारेका उनै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ५ नम्वर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको प्रत्याशी बनायो । एकातिर सत्तारुढ नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा वर्करार रहेका, अकोीतर २०७० को आम चुनाव आफ्नै पूर्व सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईसंग चुनाव हारेका र चुनाव हारे लगत्तै मनोनित वा अर्को बाटो भएर फेरि यही संसदमा जान्न भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्धता नै जनाएका नारायणकाजीलाई दोहोरयाएर साँसद हुने मौका दिईदै गर्दा मणी थापाहरु नेतृत्वको नजरमा प्रत्याशी बनाईएनन् ।
नेतृत्वले यहीनेर मणी थापाहरुका हकमा विवेकपूर्ण न्याय दिन सकेन । कारण जे सुकै होऊन, तर हार्नेलाई बारबार मौका, युद्धमा नेतृत्वदायी भूमिकासाथ लड्नेलाई बारबार उपेक्षा गर्ने गलत शैली र संस्कारको शिकार फेरि एकपट्क उनै मणी थापाहरु बने, बनाईए । कोही मरयो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता र चिन्तनको पाटो यही हो, सत्तारुढ नेकपा भित्रको ।
तर्सथ, युद्धकालिन माओवादी अर्थात अहिलेको सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वले समग्र युद्धको कित्तामा सधै क्रियाशील रहेका मणी थापा र अन्य कैयन मणी थापाहरुलाई योगदानका आधारमा अवसर दिन बिर्सने रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ । हार्नेलाई सधै मौका तर लड्नेलाई सधै उपेक्षा गर्ने वर्तमान वेथितिप्रति कठोर आत्मासमीक्षा गर्ने पालो नेतृत्वको नै हो । यहाँ पात्रको होईन, प्रवृत्तिको, विधि र विधानको ख्याल गर्न नेतृत्वले आफ्ना भूलचुकहरु सच्चयाएमा मात्र जनयुद्धमा वलिदान गर्नेहरुको योगदानको कदर र सम्मान गर्ने हुनेछ । त्यतातिर यस्तै परिघटनाहरुले नेतृत्वको चेत खुलाउन र सच्चयाउन जरुरी छ भन्नेमा त कसैको पनि बिमति नहोला नी होला र ?
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन ओली, दाहाल र देउवाको संयुक्त बैठक
भियतनाम र कोरियाको युद्धमा भन्दा कोरोनाका कारण अमेरिकामा...
डोनाल्ड ट्म्पले विगतमा भएका आफ्ना गल्ती सुधार्नतिर नलागेर आफ्नो दम्भ देखाइ नै रहेका...
सरकारले अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने
सरकारले भूमिको दिगो उपयोग गर्न भूमि ऐन समेत बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र...
शेयरबजार सूचकमा सुधार, ८.३० अंकले बढ्यो
आठ दिनदेखि लगातार घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार सूचकांक बुधबार मात्र केही माथी लागेको...